PressReader - Ilanga: 2018-02-15 - UGXEKA I-SAFA NGEBANYANA
UGXEKA I-SAFA NGEBANYANA
Ilanga - 2018-02-15 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
UKHWELE wadilika kwiSouth African Football Association (Safa) uPortia Modise owazakhela udumo engumgadli weBanyana Banyana.
UPortia usola iSafa ngokuhudula izinyawo ekuqokeni umqeqeshi omusha weBanyana. Lesi sikhundla sibanjwe okwesikhashana nguDesiree Ellis osithathe emuva kokushiya kukaVera Pauw waseNetherlands.
Utshele ILANGA izolo ngoLwesithathu ngesikhathi kuqhubeka uqeqesho lwabaqeqeshi beSAB League eHigh Performance Centre (HPC) ePretoria. Uthi kayimphathi kahle indaba yokuhamba ngonyawo lonwabu kwezinhlelo zokuqoka umqeqeshi ozovala isikhala sikaPauw.
Uthi ngokwakhe uDesiree akakulungele ukuthatha lo msebenzi wokucija iBanyana kwazise akanaso isipiliyoni. Uthi kuningi okusamele akufunde kwezokuqeqesha. Uthi okubalulekile kwiSafa wukufaka abangani babo ezikhundleni nje hhayi ukufukula ibhola labesifazane.
“Ngizwile ukuthi bafuna ukuthi kube neligi yabesifazane. Abakwenzayo wukukhuluma nje kuphela. Nami ngalinda ngaze ngayeka ukudlala ibhola benza izethembiso ezingekho. Kuyadabukisa ukuthi ngashaya amagoli ali-101 ngaphezu kukaBenni McCarthy kodwa kangaziwa nokuthi ngenzani. Yingakho sengibone ukuthi ngiqhubeke nokwenza izifundo zokuqeqesha ukuze ngingadlisi izingane ushevu,” kusho uModise. Uqhube ngokuthi kwamanye amazwe abadlali abafana naye banikwa ithuba ukugqugquzela abadlali abasakhula.
UPORTIA Modise obengumgadli oqavile weBanyana eminyakeni edlule ucasulwa yiSafa eshaya ngolonwabu ukuqoka umqeqeshi omusha walesi sikwati.